अचानक आसपास यस्ता चीज देखिए भने सम्झनुहोस् भाग्य चम्किदैछ, हुनेछ धनको वर्षा – Sandesh Press
अचानक आसपास यस्ता चीज देखिए भने सम्झनुहोस् भाग्य चम्किदैछ, हुनेछ धनको वर्षा
September 13, 2021 228
काठमाडौँ । माता लक्ष्मीको तपाईप्रति कृपा हुनुको पहिलो संकेत तपाईको आसपास अचानक हराभरा चीज देखिने गर्दछन्।
यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् तपाईमाथि माता लक्ष्मीको कृपा मिल्नेवाला छ। झाडू र लक्ष्मी माताको गहिरो सम्बन्ध हुने गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा तपाईलाई बिहान बिहान कसैले झाडू लगाएको देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुनेछ। यदी शंखको आवाज सुनियो भने तपाईको घरमा लक्ष्मीको आगमन हुने संकेत हो।
यदी तपाईले शंखको आवाज सुन्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाईको भाग्य चाडै चम्किदै छ। बिहान बिहान उखु देखिनु निकै शुभ संकेत छ।
यदी अचानक उखु तपाईको आसपास देखियो भने सम्झनुहोस् तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुन्छ। माता लक्ष्मीको वाहन उल्लू हो।त्यसैले यदी प्राय तपाईको वरीपरी उल्लू देखिन्छन् भने सम्झनुहोस् तपाईमाथि माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुनेवाला छ।
माता लक्ष्मीको तपाईप्रति कृपा हुनुको पहिलो संकेत तपाईको आसपास अचानक हराभरा चीज देखिने गर्दछन्। यस्ता संकेत देखिए भने सम्झनुहोस् तपाईमाथि माता लक्ष्मीको कृपा मिल्नेवाला छ।
झाडू र लक्ष्मी माताको गहिरो सम्बन्ध हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा तपाईलाई बिहान बिहान कसैले झाडू लगाएको देख्नुभयो भने सम्झनुहोस् तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुनेछ। यदी शंखको आवाज सुनियो भने तपाईको घरमा लक्ष्मीको आगमन हुने संकेत हो।
यदी अचानक उखु तपाईको आसपास देखियो भने सम्झनुहोस् तपाई चाडै धनी बन्दै हुनुहुन्छ। माता लक्ष्मीको वाहन उल्लू हो।त्यसैले यदी प्रायः तपाईको वरीपरी उल्लू देखिन्छन् भने सम्झनुहोस् तपाईमाथि माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुनेवाला छ।
Prevयी दिनमा भूलेर पनि नटिप्नुहोस् तुलसीको पात, नत्र बिग्रिन सक्छ तपाईको भाग्य !
Nextलोक बहादुरको कल रेकर्ड चेक: मा र्न लगाउने नाइके अर्कै? प्रहरिको अर्को सफलता
यीनै हुन नेपालमै पहिलो पटक “बिहे नेपाल” एप चलाएर ‘जीवनसाथी खोजिदिने’ दिदीबहिनी